सबैले स्पष्ट बुझे हुन्छ, अब म अल्पमतमा पर्ने गल्ती गर्दिनँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली – Khabar Patrika Np
सबैले स्पष्ट बुझे हुन्छ, अब म अल्पमतमा पर्ने गल्ती गर्दिनँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०३, २०७७ समय: १६:३४:२५
काठमाडौं : आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेपछि झन्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार झन्डै बहुमतमा झर्‍यो। नेकपा फुटेर चिरा–चिरा भयो। अन्त्यमा नाम खोसिएर साविक एमाले र माओवादी केन्द्र निर्माण भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो अवस्था आउनुमा आफ्नो मुख्य गल्ती ‘अरूको बहुमत बनाइदिनु’ रहेको ठान्छन्। त्यसैले उनी अब भने अल्पमतमा पर्ने गल्ती नगर्ने निचोडमा पुगेका छन्।
एमाले र माओवादी पुनः एकीकरणको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीको जवाफ छ, ‘माओवादी होइन, प्रचण्ड गुट अलग भएको छ। माओवादीका अरू साथी मिलिरहेकै छन्। मिल्ने सिलसिला जारी छ। प्रचण्ड गुट पनि मिल्न चाहन्छ भने निर्वाचन आयोगले १५ दिन समय दिएको छ। अझै केही दिन बाँकी छ। तर, हिजोको झैं एकता हुँदैन। गलत आधारमा, गलत तरिकाले, गलत शक्ति दिएर एकता गर्‍यो भने त्यसको परिणाम राम्रो आउँदो रहेनछ। त्यो हामीले देख्यौं।’
सर्वोच्चले जनमत लिने बेला भएको छैन भन्ने देखायो नि, होइन ? ओलीको प्रत्युत्तर छ, ‘एक समयको सर्वोच्च अदालतको फैसला यो आयो।’ अर्को समय अर्को आउन सक्छ ? उनको भनाइ छ, ‘त्यो त संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले गर्ने हो। यसपालिचाहिँ सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने आफ्नो अधिकार पनि फैसलाबाट अलि छाडिदिएको देखिन्छ। व्याख्या नगरेर लेखेको छैन भन्यो। लेखेको मात्रैलाई त व्याख्यै गर्नु पर्दैन। लेखेकै कुराका लागि त ५ जनाको इजलासले महिनौं माथापच्ची किन गर्नुपर्‍यो ? सयौं वकिलले बहस किन गर्नुपर्‍यो ?’
यसबारे सोधिएको प्रश्नमा एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्टोक्ति छ, ‘अदालतको फैसलापछि उहाँहरू पार्टीमा फर्किनुपथ्र्यो। कार्यालयमा आउनुपथ्र्यो। अध्यक्षसँग भेट्नुपथ्र्यो। हराएको अढाइ महिना भएको मान्छे यहाँ छौं भनेर देखिनुपथ्र्यो। पहिला त यहाँ छौं भनेर माइतीघरमा टाँसेर बस्नुहुन्थ्यो, अहिले त त्यो पनि थाहा भएन। कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ ? यो अवस्थामा पार्टी त अगाडि बढ्नुपर्‍यो। महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने छ। उहाँहरूले छाडेको पार्टीको पदको कत्रो चिन्ता गरेको ? फेरि महाधिवेशनबाट आए भइगयो नि !’
लड्दै भिड्दै कोरोनाबीच धेरै काम गरेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति छ।